Best iPhone File Nchọgharị maka Windows / Mac
> Resource> iPhone> Best iPhone File Nchọgharị maka Windows (Windows 8 gụnyere)
Ị na-achọ ihe iPhone File Nchọgharị iji lelee faịlụ gị iPhone, otú i nwere ike jikwaa ndị a faịlụ anya? Ọ bụrụ otú ahụ, m ga-amasị atụ aro ka ị na-agbalị Wondershare TunesGo. Ọ bụ ihe kasị mma iPhone faịlụ nchọgharị. Na ya, ị pụrụ ịhụ songs, playlist, vidio, na photos ma na iPhone Igwefoto Roll & Photo Library na gị iPhone mfe.
Gbalịa Wondershare TunesGo ugbu a!
Wondershare TunesGo, ma ya Windows na Mac na nsụgharị ndị dị. Ugbu a na atụmatụ na Windows version nwere ihe karịrị na Mac version. Wondershare TunesGo (Windows)-ahapụ ị na-agagharị ma jikwaa songs, playlist, videos, photos, kọntaktị, SMS on iPhone. Wondershare TunesGo (Mac) nanị na-akwado nchọgharị song, vidio, na photos ugbu a! N'ọdịnihu version ga tinye ihe atụmatụ. Na-esonụ, anyị na-eche banyere iPhone faịlụ nchọgharị maka Windows PC - Wondershare TunesGo (Windows), na-agwa gị ihe ọ pụrụ ime n'ihi na ị.
Gịnị nwere ike Njikwa Nchọgharị maka iPhone-eme?
Nchọgharị music, videos, playlist, photos, SMS, na kọntaktị na iPhone;
Nyefee music, listi ọkpụkpọ, na vidiyo si na iPhone ka iTunes Library on PC;
Back elu music, playlist, videos, SMS, na kọntaktị site na iPhone ka PC;
Detuo music, playlist, videos, foto, na kọntaktị site na kọmputa na-iPhone enweghị erasing mbụ faịlụ na iPhone;
Tinye ọhụrụ kọntaktị Ama ozugbo na iPhone on kọmputa;
Nyefee na kọntaktị site na vCard faịlụ, Outlook, Windows Liver Address Book, na Windows Live Mail na-iPhone;
Back elu iPhone kọntaktị na vCard faịlụ, Outlook, Windows Liver Address Book, na Windows Live Mail na-iPhone;
Ebe ọ karịrị echiche? Gịnị mere ị ga-agbalị ya?
M na uche, ndị kasị mma mma maka nke a Windows iPhone faịlụ nchọgharị bụ i nwere ike iji ya na-nyefee music si iPhone ozugbo na iTunes Library na PC gị na na otu click. Nke a bụ-enye aka karịsịa ma ọ bụrụ na gị ochie kọmputa nwụrụ anwụ ma na ị nwere wughachi iTunes Library na ọzọ kọmputa ma ọ bụ ị kwụsịrị iTunes Library ruru ụfọdụ nsogbu. Mgbe iwughachi gị iTunes Library, ọ ga-agwa gị otú ọtụtụ songs ọ ahụrụ na gị iPhone-adịghị na iTunes Library, na-arịọ gị nyefee naanị ndị a na-abụghị adị n'anya.
Na mkpokọta, Wondershare TunesGo bụ ọkachamara iPhone faịlụ nchọgharị maka ị jikwaa gị iPhone faịlụ anya. Ọ na-eme ihe iTunes eme - enyefe faịlụ site na kọmputa na-iPhone. Ma ọ chọrọ iTunes apụghị ime - enyefe faịlụ site na iPhone na kọmputa na iTunes Library.
Ihuchalu iPhone File Nchọgharị ke Video ugbu a!
Olee otú Mepụta a Playlist on iPhone
Otú nyefee iPhone ka New Computer
Olee otú Naghachi ehichapụ iPhone Ndi ana-akpo enweghị ndabere